लकडाउनबाट एक खेलाडी - आफू बाँच्नुस्, अरुलाई पनि बाँच्न दिनुस् लकडाउन हाम्रै लागि गरेको त हो। यस्तो महामारीका रुपमा फैलिएको भाइरसको जोखिमलाई नबुझे जस्तो गर्न हुँदै हुँदैन। सरकारले भनेको कुरा मान्नुस्, नियम पालना गरेर घरमा नै सुरक्षित बस्नुस्। अत्यावश्यकबाहेक बाहिरतिर नस्किदिनुहोस्। यस्तो बेला केही हुँदैन भनेर सोच्नु मूर्खता हुन्छ। शुक्रबार, चैत १४, २०७६
खेलकुद विधेयक : सदस्य थुपार्ने मेसो कि प्रतिनिधिमूलक सहभागिता? अहिले विधेयकका रुपमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक, २०७५ लाई लिएर खेलकुदमा सम्बद्ध व्यक्तिहरुमा दुईथरी धारणा पाइन्छ। एकथरी ‘खे... शुक्रबार, फागुन २३, २०७६
नेपाली क्रिकेटमा दुर्घटनाको भय मलेसिया टी २० मा ३२औँ वरियताको टिम हो। हङकङ २३औँ वरियतामा छ भने नेपाल १२औँ वरियतामा छ। स्कटल्याण्ड, आयरल्याण्ड, युएई, नेदरल्याण्ड्सभ... आइतबार, फागुन १८, २०७६
महिला भलिबलमा किन बढ्दैछ चोटको समस्या? खेलाडीको माग बढ्नु र प्रतियोगिता भइरहनु त राम्रो मान्नै पर्छ। त ती प्रतियोगिता न त स्तरीय छन् न त प्रभावकारी नै। ‘इन्डोरडोर’ खेल भलि... शुक्रबार, फागुन १६, २०७६
एक ओलम्पियनको सपना सोमबार, फागुन १२, २०७६
आरसिटीले नचिताएको फुटबल आरसिटी यो अवस्थामा होला भनेर नेपाली फुटबलको अघिल्लो पुस्ताको कल्पनामा समेत थिएन। एक समय आफ्नै तीन क्लब ‘ए’ डिभिजनमा उपस्थित आरसिटी अ... सोमबार, फागुन ५, २०७६
अकिबको शतक नेपाली दर्शकका लागि आइतबार, माघ २६, २०७६
घरेलु मैदानमा पहिलो एकदिवसीय जित [फोटो फिचर] शनिबार, माघ २५, २०७६
एक नेवाः मुस्मांको फुटबल बुधबार, माघ ८, २०७६